I-Art of War - I-Sun Tzu (PDF) - I-AFRIKHEPRI FOUNDATION
Amadolobha ase-100 ase-Afrika abhujiswe ngabaseYurophu: Kungani kungekho zikhumbuzo zomlando e-Afrika
UDkt. Yosef Ben-AA Jochannan, uMnumlando Omkhulu wase-African American
UZimu “uzalelwe” e-Afrika
Amagama Asendulo kaMesiya asuka kuHieroglyph kuya kwisiFulentshi
INtshonalanga iphinda iphinde iqalise ukuhlanganisa i-Afrika
I-Art of War - I-Sun Tzu (PDF)
By I-AFRIKHEPRI FOUNDATION ngoDisemba 12, 2019
I-Art of the Sunzi War (ikhulu lesishiyagalolunye leminyaka BC) yisivumelwano sokuqala sezwe esaziwayo. Isazi sezempi kusukela ekuqaleni kweNkathi Yezizwe Eziphikisayo (475-221 BC), umbhali uthanda isu eliqondile. I-Classical yohlobo lwayo, ukuqonda kwayo kudlulela ngaphezu kwesizinda sezempi futhi kungadluliselwa ezindaweni eziningi zomsebenzi wesintu. IWest yayikujwayele ukujwayelana nayo kusukela ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Mayelana ne-Art Bin ye-War Bin (phakathi nekhulu lesine BC), kwakucatshangwa ukuthi lo mbhalo ulahlekile iminyaka engaphezu kweyinkulungwane, kuze kube sekugcineni kokungabaza ukuba khona komlobi wayo nokudideka ngawo Sunzi ukhokho. Kuze kutholakale ukutholakala, ngo-Ephreli 1972, we-bamboo slats, eWest Han Tomb eYinqueshan, esifundeni saseLinyi, esifundazweni saseShandong. Abazange baphathe kuphela umbhalo we-Art of War of Sunzi kodwa futhi babuke ne-Art Bin ye-War ye-Sun. Benza kube lula ukuhlukanisa abalobi ababili, ukuvela kwawo, futhi ekugcineni ukuqaphela umsebenzi owake wanyamalala.
Usuke usabela "I-Art of War - I-Sun Tzu (PDF)" Imizuzwana embalwa edlule
Imiphumela yamavoti 5 / 5. Inani lamavoti 1
Januwari 22, 2020
Januwari 20, 2020